कोरोना संक्रमणबारे यी ३ तथ्य आत्मसात गरौँ - डा. रवीन्द्र पाण्डे Canada Nepal
कार्तिक ६ २०७७
काठमाडौं - नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको समयमा डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसबाट बच्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइरहेका छन् । यस्तै डा. पाण्डेले कोरोना संक्रमणबारे आत्मसात गर्नुपर्ने तथ्यबारे जानकारी दिएका छन् ।